पत्याउनुस/नपत्याउनुस्: नेपालीको आम्दानी साढे १२ हजार डलर पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य ! « GDP Nepal
पत्याउनुस/नपत्याउनुस्: नेपालीको आम्दानी साढे १२ हजार डलर पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य !
Published On : 31 January, 2019 6:47 am
काठमाडौं । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि जनताले देखिनेगरी परिवर्तन भएको छैन । तर, ओली सरकारकै राष्ट्रिय योजना आयोगले भने २५ वर्षको लक्ष्य तय गरेको छ र अहिलेभन्दा १२ गुणा प्रगति हासिल गर्ने दावीका साथ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार डलर पुग्ने दाबी गरेको छ र सो बेला नेपाल उच्चआय भएको समृद्ध मुलुक हुने प्रक्षेपण पनि छ । वि. सं. २१०० सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर हुने उसले दाबी गरेको छ ।
हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ डलरमात्र छ ।
कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदानबाट देशको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण सम्भव रहेको आयोगको भनाइ छ । दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत २५ वर्षीय ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को मार्गचित्र आयोगले निर्माण गर्दैछ ।
जसअन्तर्गत अवको पाँच वर्षभित्र समृद्धि र सुखको सिर्जना गर्ने, त्यसपछिको १० वर्षभित्र समृद्धि र सुखको तीव्रता र बाँकी १० वर्षभित्र समृद्धि र सुखको दीगोपना स्थापित गर्ने २५ वर्षीय महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ ।
आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा अबको पाँच वर्षमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आव २०७५÷७५ मा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाएर अबको पाँच वर्षसम्ममा १० दशमलव १ प्रतिशत बनाउने महत्वाकांक्षी योजना बनाइएको छ ।
यस अवधिमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी कूल ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ लगानी हुने प्रारम्भिक खाकामा उल्लेख छ । जसमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी ५८.१ प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्रको ३६.६ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको ४.३ प्रतिशत लगानीको अपेक्षा गरिएको छ ।